Fiantsonana tamina vavahady Fiara 4X4 nanidy ny lalan’ny mpandevina teny Mahamasina
Fiara tsy mataho-dalana iray nibahana vavahadin’olon-tsotra teo Ankadilalana Mahamasina. Nikasa hitondra fiara handeha handevina ireo fianakaviana voahidy tao kanefa tsy tafavoaka. Ireo
mponina tao anaty faritra aza voatery mananika tamboho na miakatra eo amin’ilay fiara ka voatery manao pataloha avokoa na lahy na vavy. Niteraka resabe tamin’iny faritra iny ity fiarakodia ity. Voatery nampiasa mpitandro filaminana roa ny polisy nandrindra ny
fifamoivoizana teo an-toerana ny sabotsy tontolo teo noho ny haterin’ny lalana. Amboarina mantsy ny an-kilan’ny arabe ka tsy mahazaka ifanenana ny arabe mampitohy an’i Mahamasina sy
Tsimbazaza. Araka ny fanadihadiana an-gazety, efa ny zoma alina tamin’ny 9 ora sy sasany tany io fiara io no tsy tafakatra ka nihemotra ary io naka sisiny nifanerana tamina vavahady io. Araka ny loharanom-baovao teny an-toerana, mamo toaka ilay tovolahy kely mpamily ny zoma alina ka izay no ahiana tsy nahatafakatra io fiara io ho any Ankadilalana sy tsy nahatazananay ilay vavahady. Mitaraina fatratra koa ny mponina ambanin’ny zandary iny izay efa tery ny lalana nefa bahanan’ny fiara vitsy ny lalan’ny mpandeha an-tongotra. Namana mpanao gazety iray hamonjy ny asany koa voahidy tao niaraka tamin’ny fiarany.